Dumbbell ဘောလုံးခွေးကစားစရာ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောခွေးကစားစရာ၊ အစားအစာခွဲစက်၊ အိမ်-dogstore-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
Burmese Dumbbell ဘောလုံးခွေးကစားစရာ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောခွေးကစားစရာ၊ အစားအစာခွဲစက်၊ အိမ်
အစားအစာဖြန့်ဝေသည့်ဘောလုံးတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီအပြည့်ပါသောအံသွားအချို့ရှိပြီးထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သဖြင့်၎င်းသည်သွားတိုက်တံကဲ့သို့လူသားအိမ်မွေးသွားများကိုနှစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။
ထိုအခါအသစ်ဒီဇိုင်း cuspid အံရုပ်သံလိုင်းအပြည့်အဝနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခွေးရဲ့အံ, incisor နှင့် ineine ကိုရှင်းလင်းနိုင်သည့်အလားတူထုတ်ကုန်, ကျော်လွန်ခဲ့သည်။
ခွေးကစားခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားရန်အတွက်အစားအစာပေးသည့်ဘောလုံးတွင်ခွေးအစာသို့မဟုတ်မုန်ထည့်နိုင်သည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်ခွေးနှစ်ကောင်အားတစ်ချိန်တည်းတွင်အပြန်အလှန်ကစားရန်ကစားစရာအဖြစ်အသုံးချနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ပျော်စရာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: အံကပ်: ၅.၉ * ၂ လက်မ / အံသွား - ၃.၁ လက်မ၊ ၈.၁ အောင်စ
အထုပ်: တစ်ဘူးလျှင် 70 PCs, 18.7 × 18.7 × 19.88 လက်မ, 45.64lb
Zidole za Galu, Zigalu zagalu, Kulimbana ndi kuluma, Zoseweretsa za Molar, Mipira ya Molar, Zidole Zakugawa Chakudya
Mawonekedwe:√√√√Uwu ndi mseru wosaloleka komanso woluma womwe suthana ndi galu. √√√√Kunja kwake kumapangidwa ndi zinthu zakuthupi zowoneka bwino komanso zovuta kuzilimbitsa. √√√√Mkati mwake mumapangidwa zopangidwa ndi
ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡੌਗ ਰੱਸੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸੈੱਟ ， ਸੱਕਸ਼ਨ ਕੱਪ ਡੌਗ ਚੂ ਟੌਇ, ਮੋਲਰ ਬਾਈਟ ਟੌਇ, ਡੌਗ ਟੂਥ ਬਰੱਸ਼
ਇਹ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਚੂਸਣ ਕੁੱਤਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸੈਟ ਹੈ. √√√√ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ4ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. √√√√ਅਤੇ ਹਰੇਕ
اسباب بازی گربه ، اسباب بازی گربه های پازل ، اسباب بازی با مواد غذایی ، توپ تعاملی گربه
این یک اسباب بازی گربه چند منظوره است ، ترکیب ویژگی های اسباب بازی ، پخش مواد غذایی ، تعامل با مالک ، بهبود ضریب هوشی ، آزادی اضطراب و ا